October 2020 - Online Hartha
ပနျးသေ၊ ပနျးညှိုး၊ ဆီးနှငျ့ဆီးကြောကျ တညျသော ရောဂါတို့အတှကျ…
October 31, 2020 by Online Hartha
ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုး၊ ဆီးနှင့်ဆီးကျောက် တည်သော ရောဂါတို့အတွက် မဉ္စူပန်း(ခေါ်) လေးနာရီပန်းအစွမ်း မဉ္စူပန်း(သို့) လေးနာရီပန်းကို ပန်းလောက ပန်းသဘာဝတွင် ထူးခြားသောပန်းဟု ရှေးဆေး ဆရာမြတ်တို့ ဘာကြောင့်ဆိုကြသလဲ? တစ်နေ့ ကိုတိုးနှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်း မကြည်မလင်နှင့်သက်ပြင်းကြီး တဟင်းဟင်းချနေသော ကိုတိုးကိုကြည့်ရင်းကိုတိုးဘာဖြစ်နေတာလဲဗျ.။မကြည်မလင်နဲ့ နေမကောင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ..ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပါ။ ပန်းသေ၊ပန်းညှိုး ဖြစ်နေတယ်ထင်ကြောင်း ပြောပြလေသည်။ရွှေစိတ်တော် ညှိုးနေသည့် ကိုတိုးအတွက်မ ဉ္စူပန်း (၄)နာရီပန်းဥကို ဆေးနည်းရွေးကာ ဓာတ်စာလေးပေးခဲ့ရာ ထူးခြားပါတယ်၊ အောင်မြင်ပါတယ်ဆိုသော အဖြေတစ်ခုဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးသုခကိုပြန်လည်ရရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ကိုတိုးအတွက် ဝမ်းသာမိပါသည်။ မဉ္ဇူပန်း – ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ (Mirabilis jalapa Linn) ဖြစ်သည်။ ပင်ပျော့ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ညနေ(၄)နာရီအချိန်မှ (၄)နာရီအချိန်အထိသာပွင့်သောကြောင့် (၄)နာရီပန်းဟု ခေါ်သည်ဟု ဆိုလေသည်။ အပွင့်အနီ၊ … Read more
ချစ်သူသက်တမ်း လေးနှစ်မှာ သိန်းသုံးဆယ်စုမိခဲ့သော ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဘဏ်စာအုပ်ကလေး
ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်… အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်… ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ၁ပုံလောက်ပေ့ါ) တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီး ဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ် Bank account ကိုလဲ ၂ယောက်နာမည်နဲ့ KBZ_Call_Deposits_account လုပ်ထားလိုက်တယ် အဆင်ပြေတဲ့လူ သွားလို့ရအောင်ပေါ့…အဲ့လိုနဲ့ စု လာလိုက်တာ ဘဏ်စာအုပ်လေး ၂နှစ်နဲ့ ၄လ ပြည့် ( ရည်းစားသက်တမ်း ၄နှစ်နဲ့ ၄လ)မှာ သိန်း ၃၀ လောက် စုမိသွားတယ်ဘဏ်စာအုပ်လေးခနခနထုတ်ထုတ်ကြည့်ပြီး ပီတိတေဖြာတဲ့ အရသာကလေ ဘယ်လိုပြောရမလဲ… (တအားမများပေမယ့် မိန်းကလေးမို့လားတော့မသိစာအုပ်ထဲက ဂဏန်းခုနှစ်လုံးကို ကြည့်နေရတာနဲ့ကို အရမ်း စိတ်ချမ်းတေ သာနေပါပြီနော်) ချစ်သက်တမ်းတွေတိုးလာတာလည်း သက်သေတစ်ခုပဲပေ့ါနော် … Read more
ဒီသမိုငျးလေးကို သိပွီး သကာလ“နောငျအခါ ကြှနျတျော ခါငှကျသား မစားတော့ပါ… ”
ဒီကြောင်းလေးတွေ သိပြီးကတည်းက နောက်အခါ “ ခါငှက်သား မစားတော့ပါ ” ဒီသမိုင်းလေးကို သိပြီး သကာလ “ နောင်အခါ ကျွန်တော် ခါငှက်သား မစားတော့ပါ ” ပြောင်ခေါင်းဒေသရဲ့ တောတောင်ထဲ ရောက်ချိန် မှာ ငှက်မုဆိုး တစ်ယောက်က လာရောင်းတာ .. တစ်ကောင်ကို ၃၀၀၀ – ကျပ် နဲ့ ခါငှက် ၂ ကောင် ။ ၂ ကောင်ဆိုတော့ ၆၀၀၀ – ကျပ်ပေါ့ ။ ဝယ်မိတာ ကတော့ အသေကောင်တွေပါ … ။ အဲဒီ ငှက်မုဆိုးကို ခါ – ကို ဘယ်လို ထောင်သလဲ အင်တာဗျူးမိတယ် ။ သူတို့ပြောတာက ခါငှက်အထီး … Read more
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေဖြင့် တစ်ပတ်ကို ခေါင်း ဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်သလဲ?
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့တစ်ပတ်ကို ခေါင်း ဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်လဲဆိုရင် လူတိုင်းမှာ မွေးရာပါ အသားအရေ အမျိုးအစား မတူညီကြ သကဲ့သို့ ဆံသားအမျိုး အစားလည်း ကွဲပြားခြား နားကြပါတယ်။ (က) ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံသား (ခ) ပုံမွန်(အလယ်အလတ်) ဆံသား (ဂ) ဆံသားအုံကောင်း (ဆံပင်ထူ) (ဃ) ခြော က်သွေ့ (မွဲခြောက်ခြောက်) ဆံသားဆိုပြီးတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဆံသားလေးမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မတူညီတဲ့ ဆံသားအမျိုး အစားပေါ်မူတည်၍၊ ခေါင်းလျှော်တဲ့ အကြိ မ်နှုန်း ဟာ လည်း အနည်းအများ ကွာဟမှုရှိပါတယ်။ ၁။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံသားပိုင်ရှင်များအတွက် ကျန်းမာတဲ့ဆံသားတွေက အခြားဆံပင်အမျိုးအစားတွေထက် ပို၍အဆီစုပ်ယူမှု အားကောင်းကြတာကြောင့် daily use shampoo (ခေါ်) နေ့စဉ်သုံးရှမ်ပူအမျိုးအစားကို … Read more
မိန်းကလေးတိုင်း သတိပြုသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများရဲ့ အစပျိုး လက္ခဏာရပ်များ
မိန်းကလေးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများရဲ့အစပျိုးလက္ခဏာရပ်များ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံက အမျိုးသားတွေနဲ့ လုံးဝကိုခြားနားနေပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာသာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတချို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ ရက်ရှည်လများအစပျိုးပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ ရောဂါအစပြုနေချိန်မှာ သတိထားမိခဲ့ရင်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် အချိန်မီတားဆီးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ ရောဂါအစပျိုးလက္ခဏာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဗိုက်ပူနေခြင်း မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ လေ့ကျင့်ခန်းတွေသေချာမလုပ်ဘူးဆိုရင် ဗိုက်ပူလာတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်မှာအဆီစုပြီး ဗိုက်ပူတာက ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပေမယ့် အစားအများကြီးစားထားသလိုမျိုး ဗိုက်ဖောင်းပြီးပူနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်က အမြဲလိုလိုတင်းပြီး ပူနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရင်သားကင်ဆာ ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်ကင်ဆာအစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၂) မေးစေ့နားတဝိုက်ဝက်ခြံတွေထွက်ခြင်း ဝက်ခြံထွက်တာကလည်း ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တတ်တဲ့အရာမို့ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မေးစေ့နားတဝိုက်မှာ ဝက်ခြံတွေအမြဲလိုလိုထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟော်မုန်းတွေ အလွန်အမင်းကမောက်ကမဖြစ်နေပါပြီ။ သင့်မေးစေ့နားတဝိုက်မှာ ဝက်ခြံတွေအမြဲထွက်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြသစစ်ဆေးဖို့လိုနေပါပြီ။ (၃) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ … Read more
အရှုံးကနေ ပွနျလညျနိုးထပွီး အကောငျးဆုံး ပွနျလာမယျလို့ ပရိသတျကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ အောငျလအနျဆနျရဲ့ ဗီဒီယို (ရုပျသံ)
အရှုံးကနေ ပြန်လည်နိုထပြီး အကောင်းဆုံး ပြန်လာမယ်လို့ ပရိသတ်ကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ဗီဒီယို ဒီရိုက်ဒါရဲ့ ချုပ်ကွက်မိပြီး မထင်မှတ်ပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အပေါ် အောင်လအန်ဆန်ကိုယ်တိုင်လည်း အတော်လေးကို မချိ တင်ကဲ ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသား ဒီရိုက်ဒါကို ပထမအချီနဲ့တင် မထင်မှတ်ပဲ အရေးနိမ့်ခဲ့ရပြီး မစ်ဒယ် ဝိတ်ခါးပတ်ကို လက်လွှဲပေးခဲ့ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရှုံးခဲ့ပေမယ့်လည်း အောင်လအန်ဆန်က သူ့ကိုချစ်တဲ့၊သူချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကို နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင် တော့ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ ကတိပေး ပြောစကားဆိုလာပါတယ်။ “ဟိုင်း ဒီညဟာ ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး၊ ဒီညကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲမရခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အရှုံးကနေပြန်လည်နိုးထလာမှာပါ။ကျွန်တော့်ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ အယောက်စီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်”လို့ အောင်လအန်ဆန်က သူ့ရဲ့ လူမှု စာမျက်နှာထက်က နေ ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ အောင်အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်က ကိုဗစ် ဖြစ်ခဲ့သေးပြီး ပြန်လည်သက်သာလာတာ ဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက ပွဲမ … Read more
ကမ်ဘာတှငျ ကပျကွီးသုံးပါး ပွငျးထနျစှာ ဖွဈမညျ့ အကွောငျးကို ခရဈနှဈ (1910)ခနျ့ကကွိုတငျ ဟောကွား ခဲ့သော လယျတီဆရာတျောဘုရားကွီး
ကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါး ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့် အကြောင်းကို ခရစ်နှစ် (1910)ခန့်ကကြိုတင် ဟောကြား ခဲ့သော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး မြန်မာပြည်အား အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်သော ကိုလိုနီခေတ်တွင် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားသီတင်းသုံးနေသော ကျောင်းသို့ အင်္ဂလိပ် နယ်ပိုင်မင်း သမီး ” မက်ကလပ် မေရီ” တစ်ယောက် ရောက်ရှိလာသည်။ထိုအင်္ဂလိပ် အမျိုးသမီးသည် ခရစ်ယာန် မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကူးပြောင်း သက်ဝင်ယုံကြည် သဖြင့် လယ်တီဆရာတော် ကို အလွန်မှပင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်လေသည်။ သူမ၏ အဖေနယ်ပိုင်မင်းသည် မြန်မာပြည်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ကျသဖြင့် သူမသည်လည်း မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွားကာ မြန်မာစကားကို ရေလည်စွာ တတ်ကျွမ်းလေသည်။ မေရီသည် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားအား ရှိခိုး ပြီး မနေ့ည ကသူမထူးဆန်းစွာမက်သော အိမ်မက်ဆိုးကြီးကို သုံးခုအား … Read more
လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ…
လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ ငွေဝင်ဂါထာဟု ကျော်ကြားသော ဒိဝါတပတိဂါထာတော် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာပါဠိတော် (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။ အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိံဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။ (၂) တာဒိသံ တေဇသမ္ပန္နံ ၊ ဗုဒ္ဓံ ဝန္ဒာမိ အာဒရံ။ နမက္ကာရာ နုဘာဝေန ၊ သဗ္ဗေ ပူရေ န္တု သင်္ကပ္ပါ။ ဂါထာတော် မြန်မာပြန် အနက် (၁) နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ လမင်းသည် ညဉ့်အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ … Read more
အမျိုးသမီးများ ယောက်ျားမသိအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖတ်ထားလိုက်ပါ…
တစ်ရက် ဗေဒင်ဟောခန်းသို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်ချလာသည် ။ဘာအကူအညီ ပေးရမ လဲ အဒေါ်ဟု မေးလိုက်ရာ အဓိကကတော့ ကျွန်မရဲ့ ယောင်္ကျားနဲ့ သားသမီးတွေ အခုတလော အိမ်ကို ကပ်တယ်ကို မရှိဘူး ဆရာလေး။ အိမ် မကပ်တော့ ကျွန်မက စိတ်တိုင်း မကျဖြစ်။ စိတ် တိုင်းမကျတော့ ကျွန်မက အော်တော့တာပေါ့။ ကျွန်မက အော်တော့ ဒင်းတို့က နားပူတယ်ဆိုပြီး အိမ်မှာ မနေချင်ကြပြန်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဆရာရယ် ကျွန်မဖြစ်ချင်တာက ကျွန်မ ယောက်ျားနဲ့ ကလေးတွေ အိမ်ကပ်စေချင်တယ်။ အိမ်မြဲစေချင်တယ်။ ခြေမများ စေချင်ဘူး။ အဲဒါကို ကူညီပေးပါဟု ပြောလေ၏။ အင်း… အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့အဒေါ်ရေ။ ကျွန်တော် အခုပြောလိုက်တဲ့ ယတြာကိုသာ ဆောင် ရွက်လိုက်ပါ။ လင်ရော … Read more
မကျြနှာအသားရေ မဲညဈနလြှေငျ အလှယျကူဆုံး ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ နညျးလမျးကောငျးလေး
October 30, 2020 by Online Hartha
မျက်နှာအသားရေ မဲညစ်နေလျှင် အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်းနည်းလေး မျက်နှာအသား အရေမဲညစ်နေလို့စိတ်ညစ်နေလား??? မျက်နှာအသားရေ ညစ်ညစ်ကြီးဖြစ် နေလို့စိ တ်ပူနေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အညစ်ကြေးတွေ အကုန်ပြောင်စင် ပြီး ခဏအတွင်းဖြူဖွေးလာမယ့် DIY homemade ပေါင်းတင်နည်း လေးပြောပြပေးမယ်နော်… လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်ဥ တစ်လုံး သံပုရာသီး တစ်လုံး Tissue လိပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.. ပထမဦးဆုံး ကြက်ဥ အကာနဲ့ အနှစ်ကို ခွဲထုတ် ပါ့မယ် အကာရည်ကို ပဲယူပြီးခွက်ထဲ ထည့်ပြီးမွှေပေးပါ… ပြီးရင်သံ ပုရာ သီးကိုညစ်ပြီး မွှေထားတဲ့ကြက်ဥ အကာရည် နဲ့ရောပြီး ပြန်မွှေပေးပါ… မွှေထားတဲ့ အနှစ်ရည်ကို မျက်နှာပေါ် အနှံ သုပ်လိမ်းပေးပါပြီးရင် မျက်နှာပေါ်ကို Tissue ဖတ်နဲ့ အပြည့်ကပ်ပေးပြီး ၁၅မိနစ်ခန့် လောက်ခြောက်အောင် ထားပေးပါ… … Read more